एनसेलको अर्बौ घोटला काण्ड फेरी सर्बोच्च अदालतमा, के निर्णय होला ? | My News Nepal
एनसेलको अर्बौ घोटला काण्ड फेरी सर्बोच्च अदालतमा, के निर्णय होला ?
काठमाडौं।मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको अर्बौ घोटला काण्ड फेरी सर्बोच्च अदालतमा पुगेको छ। लाभकर असुल नभएसम्म लाभांश लैजान पाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध दायर सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशमा परेको छ।
एनसेलको लाभकर असुल नभएसम्म रकम विदेश लैजान नमिल्ने माग गर्दै माघ १४ गते रिट दर्ता दर्ता भएको थियो । राष्ट्र बैंकले सर्वोच्चको आदेश देखाउँदै धमाधम रकम विदेश लैजान अनुमति दिन थालेपछि सर्वोच्चमा त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
पूर्व महालेखा परीक्षक खत्रीले गतवर्ष एनसेलमा अनियमितता भएको भनी महालेखाको प्रतिवेदनमा कडाइका साथ कर असुल हुनुपर्ने टिप्पणी लेखेका थिए। रिटमा ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवन, एनसेल, रेनोल्ड होल्डिङ्स, एक्जियटा, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग, औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन बोर्ड, दुरसञ्चार प्राधिकरण, युनिभेरा क्यापिटल भेन्चर र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको छ। मुद्दाको किनारा नलागेसम्म रकम लैजान नपाउने आदेश जारी भए एनसेलले विदेश लैजान लागेको रकम रोकिनेछ।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरे मात्र यसअघि पाएको अनुमतिको आधारमा रकम लैजान पाउनेछ। एनसेलले ६५ अर्ब लाभकर नतिरी २५ अर्ब भन्दा बढी नेपाली रकम लाभाँसबापत बिदेश लैजान ठुलो चलखेल गरेपछि पुर्व प्रशासकसहितको समुहले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका हुन